Iwebhusayithi entsha yeWally machinery technology yethulwe
Iwebhusayithi yeDongguan Walley Machinery Technology Co, Ltd. yethulwe ngokusemthethweni. Siyabonga ngokunaka kwakho ukuthuthukiswa kweWally. Ukuze sikusebenzele kangcono, iwebhusayithi yeWally ibuyekeziwe futhi yathuthukiswa, futhi ikholomu yesikhungo sezindaba yewebhusayithi izosetshenziselwa ukuvuselela iWalley & ...
IVolley mechanical technology servo spindle R & D impumelelo
Isikhungo esilinde isikhathi eside sokuhlolwa ngokunemba sesisunguliwe. Ukusungulwa kwesikhungo sokuhlola ngokunemba kunikeze ukusekelwa okuqinile kokuhlola kumnyango osezingeni lomnyango wezokukhiqiza. Emkhakheni we-CNC wokukhanda ngokunemba, ukuhlolwa ngokunemba kuyisidingo esibalulekile ...
Isikhungo sokuhlola ngokunemba seWolley sasungulwa ngobuchwepheshe bemishini
I-Wally imishini ubuchwepheshe idlule ngempumelelo isitifiketi sokuphathwa kwekhwalithi ye-TS16949
Sigubha ngokufudumele ukuthi iWaley imishini ubuchwepheshe isidlulile isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwekhwalithi ye-iso / ts16949. ILso / ts 16949 iyi-ISO9001, QS 9000 (US), avsq (Italian), eaqf (French), neVDA6.1 (German) izidingo ezijwayelekile zohlelo lwekhwalithi embonini yezimoto. Ngamafuphi, i-qua ...
I-Wally imishini ubuchwepheshe isidlulise ngempumelelo isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwekhwalithi ye-ISO9001
Ngo-Agasti 26, 2009, i-Dongguan Waley imishini ubuchwepheshe wethule isitifiketi sohlelo lwekhwalithi ye-ISO9001. Kuthathe unyaka owodwa kusukela ekusebenzeni kohlelo lokuphatha lwe-ISO9001 kuze kuphothulwe isitifiketi. Ngemuva kokuqala kokuphathwa kwekhwalithi ye-ISO9001, yonke iminyango ihlanganise ...
I-Wally machinery technology 2020 yosuku lonyaka omusha umndeni uhlangana ukugubha unyaka omusha
NgoDisemba 31, 2019, ubuchwepheshe bemishini yakwaWally buqalise unyaka waminyaka yonke weLunar, nomkhosi wosuku lonyaka omusha wafika njengoba bekuhleliwe. Umnyango wezokuphatha wahlela futhi wahlela idili lesidlo sedili losuku olusha. Wonke umndeni kaWally wahlangana ndawonye ukwenza ...